UK: Boris Johnson oo xiray kalfadhiga Baarlamaanka iyo Xiisada Brexit oo weli taagan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / UK: Boris Johnson oo xiray kalfadhiga Baarlamaanka iyo Xiisada Brexit oo weli taagan
UK: Boris Johnson oo xiray kalfadhiga Baarlamaanka iyo Xiisada Brexit oo weli taagan
August 29, 2019 - By: Hanad Askar
Britain’s Prime Minister Boris Johnson has angered opposition lawmakers by asking Queen Elizabeth to suspend Parliament — a move that would allow him more leeway to secure a no-deal Brexit.
Raysalwasaaraha UK Boris Johnson ayaa sheegay in la xiray Kalfadhigii Baarlamaanka dalkaasi illaa bisha Oktoober, arrintan oo ay si weyn uga soo horjeesteen mucaaridka oo go’aankan kadiska ah ku tilmaamay Inqilaab uu doonayo Boris inuu uga hortago in Xildhibaanada ay horjoogsadaan qorshihiisa Brexit oo wakhtigeedu ku egtahay 31-ka bisha Oktober.
Johnson ayaa tilaabadan qaaday si uu awooda uga xayuubiyo Baarlamaanka shanta asbuuc ee soo socota si markaasi uu fursad ugu helo meel marinta siyaasadiisa iyo gorgortanka uu kula jiro Midowga Yurub oo illaa 31ka bisha Oktoober u qabtay UK inay uga baxdo EU-da.
Inta badan Xildhibaanada UK ayaa kasoo horjeeda in heshiis la’aan ay dowlada UK ka baxdo Midowga Yurub arrintaasi oo ay sheegayaan inay keeni doonto dhaawac weyn oo dhanka dhaqaalaha ku yimaada maadaama Midowga Yurub uu ka xiran karo suuqooda.
Balse taageerayaasha Boris Johnson ayaa aaminsan hadii la heli waayo heshiis UK iyo Midowga Yurub isku waafaqaan in dalkooda uu ka baxo midowga heshiis la’aan iyagoo sheegaya in dhaqaalo ahaan isku filan yihiin.
Xiisadan ayaa dhici karta inay keento in Xukuumada Boris Johnson laga keeno mooshin uu Baarlamaanka kalsoonida kala noqonayo, hadii taasi lagu guuleysto waxay irida u furi doontaa in la qabto Doorashooyin cusub.